Global Voices teny Malagasy » Japana : Topimaso Kely Amin’ny Teknolojia Ekolojika Japoney · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Aogositra 2018 11:25 GMT 1	 · Mpanoratra Scilla Alecci Nandika (fr) i Manuel Naudin, Nancy
Sokajy: Japana, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Tontolo_iainana
Tamin'ny tapaky ny volana May, niaraka tamin'ilay rafitra “éco-points”, nanangana drafitra fanentanana  [amin'ny teny anglisy] ny governemanta japoney mba hampiroboroboana ny fangatahana fampiasàna kojakojan-tokantrano mandeha amin'ny herinaratra mitsitsy angovo. Ho faritana mazava amin'ny volana ambony io ny antsipiriany, aorian'ny fanamarinan'ny Diète [parlemanta japoney] ny tetibola fanampiny amin'ity taon-ketra ity.
Ny tanjona dia toa mitovy  [amin'ny teny anglisy] amin'ilay fikasàna farany mba hamerina indray ny sarin'i Japàna, foiben'ny protocole de Kyoto , ho toy ‘ny’ firenena mampiasa teknolojia izay manaja ihany koa ny tontolo iainana. Angamba koa hnamarihana ny mampiavaka azy amin'ny mpifaninana aminy akaiky, i Shina.
Raha ny marina, tsy trangan-javatra vaovao ny ‘fironana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana’. Nandritra ny taona maro, dia nanandrana nampiroborobo ireo teknolojia vaovao sy ireo fitaovana manaja ny tontolo iainana  [amin'ny teny anglisy] ho an'ny fampiasa andavanandro ireo orinasa mampiasa renivola sosialy ho fiaingàna.
Tsy ho vita ny hanolotra ireo teknolojia rehetra miaro ny tontolo iainana ireo, fa indreto misy ohatra tetikasa vitsivitsy mahaliana izay naka bahana tamin'ny taona lasa.
Hazavain'ny Se-goiken [japoney] ny antsipiriany amin'ireo akora sasany ( izay tsy mbola fantatra anarana ) vokarin'ireo orinasa japoney, fisantarana izay iraisana ihany koa amin'ireo firenena maro hafa manandrana mampihena ny fandanilaniam-poana ireo loharano sarobidy.
Voalohany indrindra, ny lobaka ‘akondro’. Nisy orinasa japoney iray nahavita namorona kofehy vaovao tamin'ny fanambarana ny hasy sy ny singa fototra avy amin'ny vatan'akondro ( vatan'akondro maherin'ny an-tapitrisany no ripaka natao toy ny fako tamin'ny taona lasa).
Efa manamboatra lobaka sy pataloha sahady amin'io kofehy vaovao io ry zareo ary hamidy eny an-tsena ny ‘jean’ amin'ny lohataona.
Avy eo, ny volobe
Orinasa iray mampiasa renivola sosialy ho fiaingàna no nanamboatra kofehy vita amin'ny volobe.
Haingam-pitombo ny alanà ‘volobe’ ary tsy misy fiantraikany firy amin'ny tontolo iainana satria afaka mitroka CO2 be dia be izy. Tsara ho an'ny tontolo iainana ny fampaniriana alanà volobe. Ankoatra izay, ampaha-roapolon'ny vidin'ny hasy no hividianana ilay akora fototra voajanahary.
Amin'izao fotoana izao, dia toa voafetra amin'ny mosara sy lamba famaohana ihany ny 100%-n'ny vokatra vita amin'ny volobe.
[…] Raha tohizantsika ny làlan'ireo haivao ara-teknolojia voalaza etsy ambony, dia mino aho fa ho hamiratra kokoa ny hoavin'i Japana.
Ny lahatsoratr'i Japan Probe  [amin'ny teny anglisy] no manazava ny votoatin'ilay lahatsary etsy ambony.
Asehon’ ilay mpitoraka bilaogy earthfuroshiki [ amin'ny teny japoney] ny fomba vaovao entina hamokarana angovo. Loharanon'angovo hafa, izay nampiharina voalohany tamin'ny 2006 no natolotry ny PDG -n'ny orinasa Soundpower Corporation  (音力発電), 27 taona amin'izao fotoana izao.
[‘Ndeha hiresaka kely ny ] herinaratra vokarina amin'ny hovitrovitra  [amin'ny teny anglisy] :
Ny famokarana angovo avy amin'ny fisaviliviliana dia midika famokarana angovo any amin'ny toerana izay betsaka hovitrovitra, ohatra any amin'ny tetezana na any amin'ireo vavahady fanarahamaso ny fidirana, izay betsaka mpivezivezy na olona na fiara.
Amin'izao fotoana izao, ity teknolojia ity no ampiasaina [amin'ny ampahany] mba hanazavàna ny tetezana Goshiki Zakura Big Bridge  [japoney] any Tokyo. Mazava  [japoney] manomboka amin'ny filentehan'ny masoandro ka hatramin'ny misasakalina ilay tetezana noho ny angovo vokatra avy amin'ny hovitrovitra ary voatahiry miendrika herinaratra nandritra ny tontolo andro. Raha ara-teoria, dia azo atao ny mamokatra angovo amin'ny toerana rehetra mihovitrovitra toy ny fitendrena kitendry na fifindran-toeran'ny zavatra iray. Manokatra ny fahafahana mamokatra angovo mifanaraka amin'ny filàna izany, fa tsy mamokatra betsaka mihoatra.
Hitanareo eto  [japoney] ny lahatsary iray tao amin'ny TV-tokyo izay manazava ny fotokevitr'io haivao io.
skyliving (zaridaina eny an-tafontrano). Sary amin'ny kaonty flickr pict u re.
Farany, asehon'ny mpanolotsaina Shimo3781  [japoney] antsika ny fironana misy  amin'ny indostrian'ny fananganana trano amin'izao fotoana izao izay mikendry ny hampitombo ny isan'ny sehatra maitso amin'ny tanàndehibe no sady mitsitsy angovo.
Isan'ny fepetra iray hiadiana amin'ny fiakaran'ny maripàna ny fambolena zavamaniry eny ambony tafontrano. Fanaovana zaridaina eny ambony tafo ity andrana ity, ary natokana ho an'ireo izay manana tafo afaka mivesatra ny lanjan'ny tany ampiasaina ho an'ny fambolena ihany.
‘Ndeha asehoko anareo ny trano Urban Net Mita, fanànan'ny orinasa NTT Urban Development Co.
Eto, dia mamboly vomanga izahay amin'ny famoronana sehatra maitso. […] Tombony roa amin'ny vidin'ny iray : legioma vaovao sy fitsitsiana angovo. Na dia mahatratra 55 degre aza ny hafanana eo ambony erana vato sy simenitra voasesi-by, ny hafanan'ny erana ao ambanin'ny ravim-bomanga dia voatàna ho 28 degre. Vokatra miavaka. Satria manampy amin'ny fifehezana ny hafanàna ao anaty trano izany, mihena ny fampiasàna ny rafitra ‘air conditionné ‘.
[ Ny hevitro manokana dia ] fomba “fanaovana voly an-tafontrano” maro sy samihafa no hiainana manomboka izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/21/123455/
 nanangana drafitra fanentanana: http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nb20090516a2.html
 toa mitovy : http://sciencelinks.jp/j-east/article/199912/000019991299A0272928.php
 protocole de Kyoto: http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto
 fitaovana manaja ny tontolo iainana: http://web-japan.org/trends/science/sci040105.html
 Hazavain'ny : http://blog.goo.ne.jp/se-goiken/e/2c8ef2fa42a7593b2329995eb0fdcdea
 Japan Probe: http://www.japanprobe.com/?p=7756
 herinaratra vokarina amin'ny hovitrovitra: http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20090419x3.html
 Goshiki Zakura Big Bridge: http://ja.wikipedia.org/wiki/五色桜大橋